HORDHAC: Chelsea v Manchester City – Gool FM
HORDHAC: Chelsea v Manchester City
CR Shariif December 8, 2018
( Premier League ) 08 Dis 2018. Cayaarta ugu weyn todobaadka 16-aad ee kulamada Premier League ayaa fiidka caawa dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Manchester City.
Kulan adag ayaa sugaya kooxda martigaliyaasha kuwasoo qasaaray laba kamida seddax dheel ee u dambeysay, halka hogaamiyaasha City aysan weli guulsarreysan horyaalka.
Waqtiga: 08:30 pm ( SGA )
Labada cayaariyahan ee Chelsea Jorginho iyo David Luiz waxay ahaayeen badal aan la isticmaalin kulankii guuldarrada kasoo gaartay Wolves bartamaha todobaadkii waxaana la filayaa in loo yeero kulanka Sabtida.
Ross Barkley ayaa soo laabashadiisa dood ku jirtaa kaddib dhaawac anqawgaa uu qabo.
Gooldhaliyaha sare ee Manchester City Sergio Aguero ayaa seegi doona kulankii seddaxaad oo xariira sababo la xariira xaalad muruqa ah.
Oleksandr Zinchenko ayaa sido kale shaki ku jiraa madaama uu qabo dhaawac wajiga ah, halka kulanka sida ugu dhaqsiyaha badan la filan karo kubbad-sameeyaha Kevin De Bruyne.
Manchester City ayaa adkaatay seddaxdii kulan ee u dambeysay dhammaan tartamada, waxaana kamida kulankii xagaagan ee finalka Community Shield, markaa oo ay badiyeen iyagoo aan gool laga dhalin.
Tani waa kulankii 161-aad ee dhexmara kooxhan dhammaan tartamada. City ayaa guuleysan karta cayaartii afaraad oo xariira oo ay la cayaaraan Chelsea markii u horreysay.
Chelsea ayaa qasaartay kaliya afar dheel 21-koodii kulan oo ay Premier League garoonkooda ku marti qadaan Manchester City, laakiim labada kamida guuldarrooyinka ayaa yimid seddaxdii xili cayaareed ee lasoo dhaafay.
Chelsea ayaa ku bilaabatay ololaha Premier League shan guul oo xariira, laakiin waxay guuleysteen kaliya afar kulan oo kamida 10-koodii kulan ee isku xigtay.
Blues waa guuldarro la’aan siddeed dheel oo ay horyaalka ku cayaareen garoonkooda xagaagan laakiin seddax kulan kamida shantii dheel ee lasoo dhaafay bar-baro ayay ku galeen.
Manchester City waa guuldarro la’aan 21-kulan oo horyaalka ah tan iyo bishii April, iyagoo adkaaday todobadii cayaar ee u dambeysay.
Waxay sido kale guuldarro la’aan yihiin 14-kii kulan ee u dambeysay oo ay ku cayaareen banaan (11 guul, iyo 3) – balse marnaba ma dhicin in 15 xariira ay guuldarro la’aan noqdaan cayaaraha sare ee horyaalka.
Juventus oo Weli la Joojin la’yahay..Xilli Guul muhiima ay gaareen Kulankii Derby d’Italia+SAWIRRO
HORDHAC: Bournemouth v Liverpool